လေးကေကော်မြို့က စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ ရာကျော် အတွက် လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူပို့ ဆောင် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဟန်ထူးလွင် (ခ) ကျားပေါက်. – XB Media & News
လေးကေကော်မြို့က စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ ရာကျော်အတွက် လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင် ပစ္စည်းတွေဝယ်ယူပို့ဆောင် လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ ဟန်ထူးလွင် (ခ) ကျားပေါက်..
အဆိုတော် ဟန်ထူးလွင်ကတော့ လက်ရှိနွေဦးတော်လှန်ရေးမှာ အတက်ကြွဆုံး ပါဝင်လှုပ်ရှားနေတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါ တယ်။ သူတက်ကြွမ်းတဲ့ အနုပညာအလုပ်နဲ့ ရန်ပုံငွေတွေများစွာရှာဖွေပေးနေတဲ့ ဟန်ထူးလွင်က NUG အစိုးရ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ဦးရည်မွန်ဆီကနေ ကျေးဇူးတင်ဂုဏ်ပြုလွှာကိုလည်း ချီးမြှင့်ခံထားရသူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။
ဒီကနေ့မှာလည်း ဟန်ထူးလွင်က ကရင်ပြည်နယ် လေးကေ့ကော်မြို့က စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက် လိုအပ်တဲ့ အသုံးအဆောင် တွေကို လှူဒါန်းပေးခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ ဟန်ထူးလွင်က “လေးကေ့ကော် စစ်ဘေးရှောင်များအတွက် ဒီနေ့ ပို့ပေးဖြစ်။ Stay safe and stay strong. Much love ❤️” ဆိုပြီး သူ့ရဲ့ဖေ့စ်ဘုတ်စာမျက်နှာကနေ ပြောလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။
ဟန်ထူးလွင်ကတော့ ကရင်ပြည်နယ် လေးကေ့ကော်မြို့က ရာနဲ့ချီတဲ့ စစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူတွေအတွက် သွားတိုက်တံ၊ သွားတိုက်ဆေး၊ ကလေးသုံးဒိုက်ဘာနဲ့ အစားအသောက်တွေများစွာကို ဝယ်ယူပြီး လှူဒါန်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ေလးေကေကာ္ၿမိဳ႕က စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူ ရာေက်ာ္အတြက္ လိုအပ္တဲ့ အသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းေတြဝယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ လႉဒါန္းခဲ့တဲ့ ဟန္ထူးလြင္ (ခ) က်ားေပါက္..
အဆိုေတာ္ ဟန္ထူးလြင္ကေတာ့ လက္ရွိေႏြဦးေတာ္လွန္ေရးမွာ အတက္ႂကြဆုံး ပါဝင္လႈပ္ရွားေနတဲ့ အႏုပညာရွင္တစ္ေယာ က္ပဲျဖစ္ပါ တယ္။ သူတက္ႂကြမ္းတဲ့ အႏုပညာအလုပ္နဲ႔ ရန္ပုံေငြေတြမ်ားစြာရွာေဖြေပးေနတဲ့ ဟန္ထူးလြင္က NUG အစိုးရ ျပ ည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၊ ကာကြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက ဦးရည္မြန္ဆီကေန ေက်းဇူးတင္ဂုဏ္ျပဳလႊာကိုလည္း ခ်ီးျမႇင့္ခံ ထားရသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။
ဒီကေန႔မွာလည္း ဟန္ထူးလြင္က ကရင္ျပည္နယ္ ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕က စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြအတြက္ လိုအပ္တဲ့ အသုံးအေဆာင္ ေတြကို လႉဒါန္းေပးခဲ့တယ္လို႔ သိရပါတယ္။ ဟန္ထူးလြင္က “ေလးေက့ေကာ္ စစ္ေဘးေရွာင္မ်ားအတြ က္ ဒီေန႔ ပို႔ေပးျဖစ္။ Stay safe and stay strong. Much love ❤️” ဆိုၿပီး သူ႔ရဲ႕ေဖ့စ္ဘုတ္စာမ်က္ႏွာကေန ေျပာလာ တာ ပဲျဖစ္ပါတယ္။
ဟန္ထူးလြင္ကေတာ့ ကရင္ျပည္နယ္ ေလးေက့ေကာ္ၿမိဳ႕က ရာနဲ႔ခ်ီတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ျပည္သူေတြအတြက္ သြားတိုက္တံ၊ သြားတိုက္ေဆး၊ ကေလးသုံးဒိုက္ဘာနဲ႔ အစားအေသာက္ေတြမ်ားစြာကို ဝယ္ယူၿပီး လႉဒါန္းေပးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။